अब यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिले नियमन गर्छ - Karobar National Economic Daily
अब यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिले नियमन गर्छ
query_builderJuly 14, 2017 9:50 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility3554
रूपनारायण भट्टराई महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभाग
यसअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा काम गरेका सरकारका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई चार महिनाअघि यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकका रूपमा आएका हुन् । यातायात क्षेत्रको सुधार निकै कठिन देखिएको छ ।
व्यवसायीको दबाबदेखि कर्मचारीको कमाउ अड्डा भनेर बदनाम भएको यातायात क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्ययोजना महानिर्देशक भट्टराईले अघि सारेका छन् । सडकको तुलनामा सवारी निकै धेरै छन् । उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापनमा दिनदिनै चुनौती थपिँदै छ ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका लागि केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानी :
अहिले सबैको चासोको विषय बनेको उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यो समस्या समाधानका के–कस्ता योजनाहरू छन् ?
सार्वजनिक तथा निजीसमेत गरी उपत्यकामा हाल दैनिक १० लाख सवारी सञ्चालनमा छन् । सवारीको संख्या र बाटोको अवस्था हेर्दा यो म्याचिङ गर्ने अवस्था छैन । यसले व्यवस्थापनमा तत्कालका लागि समस्या देखिएको हो । हामीले हालै दुईवटा निर्णय गरेका छौं ।
पहिलो उपत्यकाबाट चल्ने लामो दूरीका सवारी गोंगबु बसपार्क हुँदै कलंकीबाट आउजाउ गर्नुपर्ने, अन्यत्रबाट गर्न नपाइने र दोस्रो रिङरोडमा ट्रक, टिपर, मिनी ट्रकलगायत मालवाहक सवारी पिक आवरको निश्चित समयमा सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । अहिले उपत्यकाका मुख्य चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अर्को कुरा, हामीले सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौं । करिडोरहरूको पुलमुनि रहेका बाटो सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं । त्यहाँबाट हामीले सवारीको राइटर्नको व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।
सवारी व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण कुरा ट्राफिक लाइट हो । एडीबीको सहयोगमा दुई÷तीन पटक टेन्डर गर्दा पनि सम्भव नभएपछि हामी सरोकारवालाहरू बसेर हालै निर्णय गरेका छौं, जुन अब सरकारले नै गर्ने छ । त्यस्तै हामीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, डिभिजन सडक, महानगर/नगरहरू सबैलाई आ–आफ्नो स्वामित्वमा भएका सडकलाई कम्तीमा सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन आग्रह गरेका छौं ।
यसमा देखिएका दुविधाहरू हल गर्दै सबै निकायले त्यो गर्छौं भनेका छन् । राइट टर्न र नो टर्नको पनि कार्यान्वयन गर्दै लगेका छौं । यो सबै काम हुँदा पनि ट्राफिक व्यवस्थापन भइहाल्छ भन्नेचाहिँ छैन । हामीले अधिकतम प्रयास गर्ने हो । सँगै उपत्यकामा जनसंख्याका आधारमा कति सवारी चाहिने हो भन्ने अध्ययन नै गरेका छैनौं । यो अध्ययन पनि हुन आवश्यक छ ।
उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा साना सवारी नै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको ट्राफिकलगायत सरोकारवालाहरूले भन्दै आएका छन्, साना सवारी नै मुख्य समस्या हुन् ?
केही वर्षयताको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा उपत्यकामा धेरै दुर्घटना पैदल यात्रुका कारण भएको छ भने त्यसपछिको कारक दुईपांग्रे सवारी रहेको देखिन्छ । एडीबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी विकास आयोजना (केएसयूटीपी) छ ।
त्यसमा एउटा प्रावधान छ, जसमा माइक्रो, टेम्पोलगायत साना सवारी एस–फाइ रुटमा कम्पनी मोडलमार्फत आउनेलाई बस खरिदका लागि सफ्ट लोन दिने सहमति भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । मास ट्रान्सपोर्टका बसहरू ल्याएर सञ्चालन गर्ने हो भने साना सवारी स्वतः व्यवस्थापन हुँदै जानेछन् । हामीले पनि प्राथमिकता दिएको र महानगरहरूले निर्णय गरिसकेका पनि छन् ।
कहाँ हो त सार्वजनिक सवारीको स्टप निक्र्योल नै छैन । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको कुन बस कहाँ जाने हो, त्यो लेखिएको बोर्ड राख्दै छौं । यसको निर्णय भइसकेको छ । त्यस्ता ठाउँमा बसले सवारी ओराल्न र चढाउन मात्र पाउनेछन् । प्राइमरी र सेकेन्डरी रुटमा सवारी रोक्न नपाउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं ।
एडीबीको सहयोगमा केएसयूटीपीमार्फत उपत्यकामा रहेका २ सयभन्दा बढी रुटलाई ६६ वटा कायम गरी कार्यान्वयन गरिने निकै चर्चामा छ । यो कहाँ पुग्यो, कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने हो ?
केएसयूटीपीको रिपोर्ट अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले कायम भएका बाटो, दिइएका रुटबीच म्याचिङ छैन । यस्तो अवस्थामा मैले यातायात कार्यालयलाई कुन बाटो, कति संख्यामा कस्ता–कस्ता बसलाई रुट दिनुभएको छ, त्यसको डिटेल दिनुस् भनेको छु ।
उक्त विवरण आएपछि हाल कायम भएको रुट र केएसयूटीपीले बनाऊ भनेको रुट हेरेर मास ट्रान्सपोर्ट चलाउने रुटमा त्यहाँ भएका साना सवारी कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
यो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनकै चरण रहेको छ । सँगै सफा टेम्पोलाई २० वर्षे प्रावधान नलाग्ने निर्णय भएकाले उनीहरू टर्सरी रुटमा सञ्चालन हुन राजी भएका छन् । यो निर्णय स्वीकृत भएर आएपछि केएसयूटीपीको पहिलो रुट कार्यान्वयन यहींबाट गर्छौं ।
वैज्ञानिक भाडादरमा भाडा समायोजनका लागि एकैपटक इन्धनमा ५ रुपैयाँ घट्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले ४.५ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य समायोजन भएको छ । यस्तो अवस्थामा भाडा नघट्नुले वैज्ञानिक भाडा निर्धारण मापदण्ड नै अवैज्ञानिक भएन र ?
दुई÷तीन पटक गरेर इन्धनको मूल्य समायोजन भएपछि मलाई धेरैले इमेल पनि लेख्नुभयो, भाडादर के हुन्छ भनेर । मैले सरोकारवालहरूसँग ब्रिफिङ पनि लिएँ । यो वैज्ञानिक भाडादरमा भेराइबल कस्ट ३५ प्रतिशत र अन्य कस्ट ६५ प्रतिशत हुनेछ ।
त्यही अनुरूप इन्धनको मूल्य ५ रुपैयाँसम्म थपघट हुँदा स्थिर रहने र त्योभन्दा बढी भयो भने समायोजन गर्ने भन्ने क्लज राखिएको छ । सोही कारण दुई वर्षयता भाडा निर्धारणका बारेमा कुनै बैठक बसेको छैन । यसको थप अध्ययनका लागि मैले कार्यदल गठन गरिसकेको छु । त्यसले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि भाडा समायोजन हुने अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा पठाउँछौं र त्यसबाट आएको सुझाव पनि समावेश गछौं ।
सँगै बजार मूल्यको समेत अध्ययन गर्न लगाएको छु । यो सबैलाई अध्ययन गरेर जे आउँछ त्यहीका आधारमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । अब राउन्ड फिगरमा भाडादर काम गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
लाइसेन्समा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ । कहिले सर्भर बिग्रियो, कहिले स्मार्टलाइसेन्स सकियो, कहिले प्रिन्ट भएन जस्ता समस्या पनि छन् । सँगै एक अञ्चलमा बनेको लाइसेन्स अर्को अञ्चलबाट नवीकरण हुँदैन । एकीकृत सफ्टवेयर बनाएर यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिँदैन ?
पहिले आईटीको कुरा गरौं । आईटीमा जब कुनै प्रोडक्ट लन्च गयौं, यसले लगत संकलन गरेर राख्ने प्रणाली मजबुत बनाएका रहेनछौं । यो महसुस भइसकेपछि मैले जीआईडीसी डाटा सेन्टरमार्फत यसलाई बजबुत बनाउने काम गरेको छु । विभागको डाटासेन्टर पनि मजबुत बनाउँदै छौं । आईटी अडिट गरिसकेका छौं । त्यहीअनुसार परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । प्रिन्टर मेसिन पनि समय–समयमा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ । थप चारवटा प्रिन्टिङ मेसिन ल्याउने प्रक्रियामा छौं ।
त्यस्तै हामी सबै अञ्चलमा कागजको लाइसेन्सरहित बनाउँदै छौं । मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, नारायणी, गण्डकी र धौलागिरिबाट यही असार मसान्तदेखि सुरु गर्दै छौं भने राप्ती, लुम्बिनी, भेरी, सेती र महाकालीमा साउन महिनाभरिमा स्मार्टकार्ड वितरण सुरु गर्छौं । जुम्लामा भने केही समय लाग्छ, त्यहाँको प्रविधिका कारणले गर्दा । जुम्लामा माग पनि कम नै छ । यसरी हामी समस्या ननिम्तियोस् भन्ने गरी काम गरिरहेका छौं । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सका दुई प्राविधिक र विभागका प्रविधिकको टोलीले काम गरिरहेको छ । स्मार्ट कार्डमा समस्या नआओस् भनेर आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
देशभर स्मार्ट कार्ड वितरण सकिएपछि मद्राससँगको सम्झौतासमेत सकिन्छ । हामीले देशभरको लाइन्सेन्सको ट्रायल विभागबाटै हेर्न सकिने बनाउँदै छौं । विभागमा देशभरको ट्रायल सेन्टरको सीसी क्यामेरा प्रयोग सफल भएपछि सचिव तथा मन्त्रीको कार्यकक्षमा उनीहरूले समेत सीधै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं । यो ट्राफिक प्रहरीले समेत हेर्न सक्नेछन् ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय दुर्घटना बढ्दा मात्र उठ्ने गरेको छ । वास्तविक रूपमै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका ठोस योजना किन आउँदैनन् ?
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कारणले दुर्घटना भएको हो, पहिले त्यो पहिल्याउनुपर्छ । ठूला सवारीमा छत राख्दा यात्रु छतमा बस्ने र लोड धेरै भएर दुर्घटना हुने गरेको छ । त्यसको समाधानका लागि मैले बसका छत अनिवार्य रूपमा हटाउन भनेको छु ।
जाँचपास गर्न आउँदा छत नहटाई पास गरे उक्त इन्जिनियरलाई विभागीय कारबाही हुने भनेको छु । यो सबै अञ्चलका कार्यालयमा परिपत्र भइसकेको छ । स्थानीय बाटोमा जिल्ला समन्वय समितिले रुट दिने हुनाले बाटोको अवस्था हेरी दिन गृहमार्फत आग्रह गरेका छौं ।
बरु हामीले आवश्यक पर्दा बाटो हेर्न इन्जिनियर उपलब्ध गराउँछौं भनेका छौं । कार्यालयहरूबाट रुटको विवरण आएपछि सबै समन्वय समितिलाई त्यहाँ कायम भएको रुट र सवारी संख्याबाहेक सञ्चालनमा रोक लगाउन परिपत्र गरिसकेका छौं । त्यस्तै यातायात व्यवस्था ऐनमा भएका जरिवानाको अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेका छौं । सबै मिलेर भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राजमार्गमा टर्निङमा मिरर र बार राख्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा ढिलाइ भइरहेको हो ? यो कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ? स्मार्ट लाइसेन्सले जस्तै नियति बेहोर्नुपर्ने त होइन इम्बोस्डले पनि ?
इम्बोस्ट नम्बरप्लेट निकै उच्च प्रविधियुक्त रहेको छ । पहिलो कुरा, यो पूरै अनलाइन सिस्टमबाट चल्नेछ । अनलाइटबाट लिएको फर्म कारखानामा आएर हेरिन्छ र कार्यालयमा जान्छ, कार्यालयले भेरिफाई गरेर फेरि कारखानामा जान्छ । यो सबै अनलाइनबाटै हुन्छ ।
सबै ठीक भएपछि नम्बरप्लेट प्रिन्ट हुन्छ र त्यो विभागमा आउँछ, विभागले हेरेर विवरण सही भए पनि फेरि कार्यालयमा जान्छ । यो समयमा उपभोक्ताको मोबाइलमा एसएमएस जान्छ— तपार्इंको नम्बरप्लेट प्रिन्ट भएर आयो, जडान गर्न आउनुस् भनेर । त्यसपछि उपभोक्ताले कार्यालयमा गएर राजस्व तिरेपछि प्राविधिकले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिदिन्छन् ।
आरएफआईडी गेट राखेका हुन्छौं, गाडी त्यो गेट क्रस गर्दा विवरण कारखाना र विभागमा आउँछ । त्यसैले यो उच्च प्रविधिको छ । हामीले २५÷२६ लाख गाडीका लागि काम गर्दै छौं, तर पूर्वाधार हामीसँग ५० लाख गाडीलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने छ । ऐनको अनुसूची परिवर्तन नहुँदा केही ढिलाइ भएको हो । मेरो योजनाअनुसार काम भयो भने साउनभरमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।
यातायात क्षेत्रमा रुट दिने लगायतका काम विभाग तथा मातहतका कार्यालयले गर्छन्, तर जारी भएका रुटमा सवारी चलाउने, सवारी चल्ने विगतमा त यातायात व्यवसायी महासंघकै सिफारिससमेत चाहिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था त छैन होला, तैपनि यातायात क्षेत्रमा व्यवसायी नै हाबी हुनुको कारण के हो, तपाईंहरू कमजोर भएर हो कि ?
हिजोको अवस्थामा व्यवसायी हाबी भएरै त्यस्तो भएको हो । कानुनी रूपमा त्यस्तो थिएन, तर व्यवहारमा देखिन्छ । अहिले धेरै सिन्डिकेट भएको भनिएको पृथ्वी राजमार्गमा कुनै पनि संघ÷महासंघको सिफारिसमा रुट दिने काम बन्द गर्नुस्, अवरोध आए मलाई भन्नुस्, त्यसको सामना म गर्छु भनेको छु । हाम्रो पनि कमजोरी भने छ ।
रुट माग्न आउनेबित्तिकै दिन्छौं । त्यहाँ कति सवारी चाहिने हो, बस कति छन्, त्यो हेर्दैनौं । यो सबै व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउँदै छौं । कार्यविधि आएपछि अझै सजिलो होला । अर्को कुरा, संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघ–संस्थाले यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने यातायात व्यवसायीलाई दर्ता गरिनु हुन्न ।
हामी यसका लागि गृहमन्त्रीकहाँ जाँदै छौं । त्यस्तै पञ्जीकरण गर्नुपर्छ सवारी साधन । पञ्जीकरणका लागि आईएलओको प्रावधान मान्नुपर्छ, अन्य नियमहरूसमेत मान्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरू यसमा आउँदैनन् । हामी यसलाई पनि कडाइ गर्दै छौं । यो कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने सिन्डिकेट भन्ने कुरै आउँदैन ।
अनुगमनको पाटो पनि यातायात व्यवस्था विभागकै हो । तर, उचित अनुगमन नगरेको गुनासो आउने गरेको छ । तपाईंहरू अनुगमनको कुरामा किन मौनजस्तै देखिनुहुन्छ ?
तपाईंले भन्नुभएजस्तो मौन त होइन, तर विभागले गर्ने स्याम्प्लिङ अनुगमन हो । यसले गर्दा अनुगमन कम तथा कमजोर भएको हो । हामी सबै मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै छौं, त्यो आएपछि अनुगमनको पाटो विभाजन गरेर गर्छौं । कार्यालय तथा विभाग आफैंले अनुगमन गर्नेछन् । म आइसकेपछि विभागले ६१ पटक अनुगमन गरेको छ । यसमा १ हजार गाडीको अनुगमन भयो, त्यसमध्ये ४ सय ६१ गाडी कारबाहीमा परे ।
अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति काम भएर पनि हो । २०४९ को ऐनअनुसारको वर्क लोडका आधारमा कर्मचारी रहेका छन् तर अहिले त्यसबारे अध्ययन भएको छैन । अनुगमनका लागि स्रोत पनि अभाव छ, यति हुँदा पनि कार्यालयलाई महिनाको दुई पटकचाहिँ अनुगमन गर है भनेका छौं ।
सवारीको प्राविधिक जाँचपास झाँक्रीले नाडी छामेझैं हेरेरै गरिन्छ । काठमाडौंमा एउटा सवारी जाँचपास केन्द्र छ त्यो पनि अर्ध सञ्चालनमा छ । कतै हेरेरै त कतै मेसिनले जाँच गर्ने अवस्था कहिले हट्ला ?
पक्कै पनि । हामीकहाँ नीति ल्याउने तर कार्यान्वयनका लागि बजेट नदिने परिपाटी छ । यो कुरा विश्व बैंकको रिपोर्टमा मैले पढेको थिएँ । हाम्रो मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिमा सातवटै प्रदेशमा भीएफटीसी (भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर) सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, एक वर्ष बित्यो, यो आव र आउने आवमा यसबारे अध्ययन गर्न १ रुपैयाँ पनि बजेट छैन ।
एउटा भीएफटीसी स्थापनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सञ्चालनमा रहेको भीएफटीसी मर्मतको काम भइरहेको छ । बाँकीका लागि सरकारले नै ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा एकरूतासहित प्राविधिक रूपमा फिट छ÷छैन भन्न भिएफटीसी नै चाहिन्छ । हेरेरै गर्न सकिने कुरा भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छु ।
विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणमा के समस्या भएर रोकिएको हो ?
यसमा दुईवटा कारण छन् । पहिले उपत्यका र नारायणीबाट हुन्थ्यो । स्मार्ट लाइसेन्स दिने भए पनि समस्या देखिएकाले एकान्तकुनाबाटै रोकेका हौं, त्यतै एकान्तकुनामा एक/दुईवटा नेपालीकरण गरिएको लाइसेन्समा समस्या देखिएकाले पनि रोकेका हौं । उपत्यकाका तीन कार्यालयबाहेक नारायणीबाट समेत रोकिएको छ ।
अब नयाँ कार्यविधिमा लाइसेन्स नेपालीकरण गर्दा उसले सवारी हाँक्नुपर्ने प्रावधान राख्दै छौं, ट्रायल नै दिनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । पारदर्शी कामका लागि र कर्मचारी आफंैले सेवाग्राहीको हुँ भन्ने सम्झेर काम गर्ने सबै साथीलाई प्रेरित गर्दै छु ।
सबै अञ्चलमा प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन राख्न संसद्को वातावरण समितिले पनि निर्देशन दिएको थियो । के यो पनि बजेट नभएरनै राख्न नसकिएको हो ?
पक्कै पनि । हामीसँग अहिले एकान्तकुनामा डिजेल/पेट्रोलको एक सेट, सानो भ¥याङमा एक सेट, वातावरण विभागमा एक सेट र सवारी परीक्षण केन्द्रमा एक सेट छन् । यो मेसिनले उपत्यकामा भएका सवारीलाई पनि पुग्दैन ।
उपत्यकाको प्रदूषणमा ३३ प्रतिशत हिस्सा सवारीको छ । योजना आयोगसँग छलफल पनि भयो, सबै राजी भए, तर प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन किन्ने पैसा आएन । मेरो योजना तत्काललाई कम्तीमा रिङरोडभित्र हरियो स्टिकरबिनाको सवारी प्रवेश नदिऊँ भन्ने थियो, तर मेसिन छैन ।
२० वर्षे सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय भयो, कार्यान्वयनको चरणमा छ । सँगै निजी तथा सरकारी सवारीमा २० वर्षे प्रावधान कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने हो ?
यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेरौं । पहिलो कुरा, २० वर्षे सार्वजनिक सवारी चलाउन प्रतिबन्ध लगायौं, चलेनन् । तर स्क्राप गर्न सवारी धनीहरू आएनन्, हामी एक हिसाबले सफल भएनौं । अब वर्कसपको मापदण्डमा पुराना÷प्राविधिक रूपमा चल्न नसक्ने सवारी निश्चित समयभन्दा धेरै वर्कसपमा राखे वर्कसपले नै जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।
सरकारी गाडी पनि पुराना छन् । निश्चित कार्यविधि बनेको छैन, त्यो बनाएर काम गर्दै छौं । यसका लागि सवारीले नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने पनि नियन्त्रणका लागि सहज हुनेछ । त्यसका लागि पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ आफूलाई त्यहीअनुरूप परिमार्जनका लागि तयारी गरिरहेको छ त ?
यसमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको हकमा सफ्टवेयर बनाउँदा नै प्रदेशअनुसार पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले प्रदेशको सीमांकन, केन्द्र नतोकिएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यस्तै लाइसेन्समा डाटाबेस बलियो बनाएर अघि बढ्दै छौं । त्यहीअनुसार अन्य सफ्टवेयरलाई पनि परिमार्जज गर्दै जान्छौं ।
सार्वजनिक यातायातलाई किन एकै रंगको बनाउन सकिएन, ताकि सार्वजनिक यातायात अलग्गै चिन्न सकियोस् ?
स्कुल बसको हकमा हामीले पहेँलो रंगकै हुनुपर्छ भनेका छौं, जुन कार्यान्वयनमा कडाइका साथ जाँदै छ । यसको निर्देशिकासमेत बनिसकेको छ ।
डाका गाडी प्रयोग गर्नेले पनि सवारीको रंग पहेंलो नै हुनुपर्छ । सार्वजनिकको हकमा नम्बरप्लेटचाहिँ हामीले रेगुलेट गर्ने हो, सबैको कालो रंगकै हुन्छ । बसको रंगमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि रहेनछ ।
कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड वा चाहेको कलरका आधारमा राख्न पाउने रहेछ । सार्वजनिक सवारीमा विज्ञापन विदेशमा राख्न पाइन्छ केही भागमा, तर नेपालमा राख्नै नपाइने व्यवस्था छ । ट्याक्सीलाई चाहिँ हामीले हालै अनुमति दिएका छौं ।
लाइसेन्स एडीबी ट्राफिक विभाग केएसयूटीपी निकाय स्मार्टलाइसेन्स